Daw Moe Moe Lwin - Yangon Hotel Expo 2019
Moe Moe Lwin is the Director and Vice Chairwoman of the Yangon Heritage Trust, an independent non-profit organization working to promote and protect Yangon’s unique heritage, develop and advocate for clear and sustainable urban policies, and engage with government, business and other stakeholders towards the goal of preserving the city’s unique architectural legacy alongside the vision of Yangon as one of Asia’s most livable cities.
Moe Moe is also the co-founder and partner of Living Design Architects and Planners, with over 22 years in architectural practice, as well as the co-founder of the Sar-Oak-Zay Publishing House. She isagraduate of the Rangoon Institute of Technology, Myanmar, as well as the Asian Institute of Technology, Thailand.
ဒေါ်မိုးမိုးလွင်သည် ရန်ကုန်နည်းပညာတက္ကသိုလ်တွင် ဗိသုကာဘွဲ့နှင့် Settlement Planning and Design ဒီပလိုမာများလေ့လာသင်ယူခဲ့သည်။ သူမသည် ဘန်ကောက်မြို့ရှိ Asian Institute of Technology တွင် မြို့ပြစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းဘာသာရပ်ဖြင့် မဟာသိပ္ပံဘွဲ့ကိုရရှိခဲ့သည်။
ဒေါ်မိုးမိုးလွင်သည် ရန်ကုန်မြို့ပြအမွေအနှစ် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့၏ ဒါရိုက်တာနှင့် ဒုတိယဥက္ကဌဖြစ် သည်။ ရန်ကုန်မြို့ပြအမွေအနှစ် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့သည် ရန်ကုန်မြို့၏ သူမတူသောအမွေအနှစ် များကိုထိန်းသိမ်းမြှင့်တင်ခြင်း၊ ရှင်းလင်း၍ ရေရှည်တည်တံ့သောမြို့ပြဆိုင်ရာပေါ်လစီများရေးဆွဲခြင်းနှင့် လှုံဆော်ခြင်း၊ ရန်ကုန်၏ သူမတူထူးခြားသောဗိသုကာအမွေအနှစ်များကိုလည်းထိန်းသိမ်းပြီးအာရှ၏ နေချင်စဖွယ် အကောင်းဆုံးမြို့တစ်ခုဖြစ်လာစေရေးအတွက် အစိုးရ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၊ အခြားပါဝင် ပတ်သက်သူများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ကိုဆောင်ရွက်နေသည့် လွတ်လပ်သောအကျိူးအမြတ်မယူ သည့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
ဒေါ်မိုးမိုးလွင်သည် ဗိသုကာအတတ်ပညာဖြင့် ၂၂ နှစ်ကျော် အသက်မွေးခဲ့ပြီး Living Design Architects and Planners ၏ ပူးတွဲတည်ထောင်ခဲ့သူပါတနာတစ်ဦီးလည်းဖြစ်သည်။ သူမသည် စာအုပ်ဈေးပုံနှိပ်တိုက်ကိုလည်း ပူးတွဲတည်ထောင်ခဲ့သည်။
လက်ရှိတွင် မြန်မာနိုင်ငံဗိသုကာအသင်း၏ အလုပ်အမှုဆောင် (ရွေးချယ်တင်မြှောက်) အဖြစ်လည်းကောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံဗိသုကာကောင်စီ၏ အလုပ်အမှုဆောင် (ရွေးချယ်တင်မြှောက်) အဖြစ်လည်းကောင်း၊ အာဆီယံ ဗိသုကာကောင်စီ၏ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ရန်ကုန်နည်းပညာတက္ကသိုလ်နှင့် နည်းပညာ တက္ကသိုလ် (သန်လျင်) တို့တွင် ဧည့်ပါမောက္ခအဖြစ်လည်းကောင်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။